NY ASAN'I KRISTY
Ny Soratra Masina dia manambara amintsika fa "Izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo amonin'ny hazo fijaliana, mba ho faty amin'ny ota isika, fa ho velona amin'ny fahamarinana." 1 Petera 2:24.
I. Mila ny asan'i Kristy ny olona
A. Inona ireo zavatra enina maha meloka ny olona tsirairay (Romana 3:10-12)?
1. ___________________________ 4._____________________________
2. ___________________________ 5._____________________________
3. ___________________________ 6._____________________________
Romana 3:23 no famintinana ny olana: "fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra."
B. Andevon'ny inona/iza ny olona (jereo Jaona 8:34)?
D. Efesiana 2:1-3.
Satria maty tamin'ny fandikàna ny Tenin'Andriamanitra sy ny ota isika; iza no nankatoavintsika karazana "zanaka" tahaka ny inona isika?
E. Efesiana 5:6.
Ny fahatezeran'iza no hihatra amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana?
HANDEFITRA AMIN'NY OTA VE ANDRIAMANITRA?
"Voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna." Galatiana 3:10.
Araka ny hitantsika tao amin'ny fizaràna fahatelo dia manome lanja ny fahamasinany Andriamanitramangataka antsika hanaja izany koa. Ny olombelona anefa dia miatrika ny:
Ota (Romana 3:23).
Fananana an'Andriamanitra ho fahavalo (Jakoba 4:4b).
Fipetrahana eo ambany fifehezan'i Satana (1 Jaona 5:19).
Fahafatesana (Romana 6:23).
Fanamelohana sy fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra (2 Tesaloniana 1:9).
II. Ny sandan'ny asan'Andriamanitra.
A. Vakio Filipiana 2:7-8.
1. Inona ireo zavatra telo nataon'i Kristy tamin'Izy tonga tety an-tany (andininy fahafito)?
2. Tahaka ny ahoana ny fomba nanetreny tena (andininy fahatelo)?
B. Isaia 53:3.
Inona no nahazo an'i Jesosy tety an-tany?
D. Hebreo 9:22.
Inona no takian'ny famelan-keloka?
E. 1 Petera 1:18-19
Naloan'i Kristy tamin'ny inona ny fanavotana antsika?
F. Matio 27-46.
Inona no nambaran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana?
G. Isaia 53:6.
Nataon'Andriamanitra inona i Jesosy tamin'Izy teo amin'ny hazo fijaliana?
III. Ny fanomezana azo avy amin'ny asan'i Kristy
Tonga tety an-tany i Jesosy Kristy mba hanonitra ny otantsika.Izany onitra izany dia nefainy tamin'ny ainy, izay natolony an-tsitrapo (Jaona 10:11,17-18). Ny sorona nataony no hany lalan-tokana manaisotra ny ota amin'ny fotoana rehetra, na ny lasa na ankehitriny na ny ho avy (Hebreo 9:12).
Hazavao eto ambany hoe inona avy no tanteraka tamin'ny nahafatesan'i Jesosy?
A. 1 Petera 3:18
B. Romana 5:10
D. 2 Korintiana 5:21
E. Galatiana 1:4
F. Efesiana 1:7
G. Romana 6:6-7
Jesosy Kristy: Vahaolana Ho An'Ny Olana Rehetra Mikasika Ny Famonjena
Ny asan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty no hany vahaolana tokana ho an'ny olombelona. Izany no nahatonga an'i Paoly nilaza fa "tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay ahazoantsika famonjena." (Asa 4:12)
Tadidio ireo valiteninao tetsy ambony (mila ny asan'i Kristy ny olona) dia diniho ny famintinana ny famahan'i Kristy ny olana rehetra mahazo ny olombelona voalaza manaraka eto.
Olan'ny olona Vahaolan ao amin'i Kristy Baiboly
A. Heloka anatrehan' Andriamanitra
1. Tsy marina
"hanaovana ny maro ho marina kosa ny fanarahana ny Anakiray"
2. Tsy mahalala "Ary fantatsika fa tonga ny Zanak'Anriamanitra nanome antsika ny fahazavan-tsaina, mba ho fantatsika ilay marina." 1 Jaona 5:20
3. Tsy mitady an'Andriamanitra "Fa efa tonga ny Zanak'olona hitady sy hamonjy ny very." Lioka 19:10
4. Nanalavitra an'Andriamanitra "Fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho an'ny Mpiandry sy Mpitandrina ny fanahinareo." 1 Petera 2:25
5. Tsy mamokatra "fa raha anananareo izany ..., dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy mamokatra ianareo." 2 Petera 1:8
6. Tsy misy asa tsara "Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara." Efesiana 2:10
B. Andevon'ny ota "Fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahin'aina no nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana". Romana 8:2
D. Miatrika fahafatesana "Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay." Jaona 5:24
E. Miatrika fahatezeran'Andriamanitra "Koa maika aza ny haonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny, rehefa nohamarinina tamin'ny ràny isika." Romana 5:9
IV. Ny anton'ny asan'i Kristy
A. Jaona 3:16, Romana 5:8
Maninona no navotan'Andriamanitra ny olona?
B. Hebreo 1:3
Inona ny toetran'Andriamanitra miseho amin'ny famonjena ny olona?
D. Romana 5:6,8
Maninona no antsoin'ny mpanoratra hoe "lehibe" ny famindrampon'Andriamanitra?
V. Ny fitohizan'ny asan'Andriamanitra
Ny fahafatesan'i Kristy teo Kalvary no nahavita ny asa famonjeny ny olona (Jaona 19:30). Tsy tapitra hatreo anefa ny tantaran'ny famonjena. Tsy voatazon'ny fasana i Kristy. Velona Izy ary manohy ny asa izay efa natombony ho antsika.
A. Romana 51:4
Ahoana no anambaràna fa zanak'Andriamanitra i Kristy?
Ahoana no nanandratana an'i Kristy taorian'ny nanadiovany ny ota?
D. 1 Korintiana 15:21-22
Miaina ny fahafatesan'ny fanahy isika amin'ny alalan'ny otan'i Adama. Inona ny tombony azontsika amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty?
Antsoin'ny Baiboly hoe "voaloham-bokatra" ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty". Ao amin'ny Testamenta Taloha ny "voaloham-bokatra" dia manambara ny vokatra miakatra voalohany natokana ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Testamenta Vaovao kosa ny "voaloham-bokatra" dia manambara fa mbola misy vokatra maro ho avy. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no manamafy ny fampanantenana fitsanganana ho an'ny maro (1 Korintiana 15:21-22, 1 Petera 1:3).
E. Hebreo 7:25
Rehefa voaantso ho an'Andriamanitra isika ankehitriny amin'ny alalan'i Kristy, inona no afaka ataon'i Jesosy?
F. 1 Timoty 2:5
Inona ny andraikitra manokana sahanin'i Kristy?
G. Jaona 14:3
Inona no nampanantenain'i Jesosy fa ho ataony tamin'Izy nandao ny mpianany?
Rehefa mahafantatra ny olona hoe iza marina moa i Kristy, dia tsapany fa diso izy hatrizay ary torotoro ny fony. Raiso ho ohatra ireo olona tao Jerosalema rehefa nisokatra ny masony.
"Ary rehefa nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony ka nanao tamin'i Petera sy ny Apostoly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay?" Asa 2:37
Inona ny azonao atao?
Ekeo fa meloka sy nanota ianao ka tsy mendrika an'Andriamanitra.
Mibebaha ary miantsoa ny anaran'i Jesosy hamonjeny anao.
Mitadiava ny famelan-keloka amin'ny alalan'ny rà-ny latsaka ho anao.
Ankatoavy ho mpitantana feno ny fiainanao Izy.
Misaora an'Andriamanitra noho ny fitiavany sy famindrampo-ny.